संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्वास्थ्य बीमा | USAHello देखि स्वास्थ्य स्रोतहरू | USAHello
डाक्टर वा अस्पताल जा संयुक्त राज्य अमेरिका मा पैसा धेरै खर्च गर्न सक्छन्. किन यो स्वास्थ्य बीमा गर्न महत्त्वपूर्ण छ यो छ. स्वास्थ्य बीमा विभिन्न प्रकारका बारेमा जान्न र तपाईं स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्न सक्छन् कसरी.
आप्रवासी लागि स्वास्थ्य छैन मूल-जन्म अमेरिका लागि स्वास्थ्य बाट धेरै फरक छ, तर कहिले काँही यो भ्रामक हुन सक्छ. यसलाई व्याख्या गर्न सरल तरिका छ भन्ने चिकित्सा खर्च हुँदा, बीमा कम्पनी तिनीहरूलाई तिर्न मद्दत गर्छ. एउटा मेडिकल आकस्मिक वा सर्जरी डलर हजारौं खर्च गर्न सक्छन्. यो अचानक एक अस्पतालमा एक विशाल बिल प्राप्त भन्दा हरेक महिना प्रिमियम तिर्न राम्रो छ. सामन्यतया, आप्रवासी र शरणार्थीका लागि स्वास्थ्य मूल-जन्म अमेरिका लागि जस्तै हो. स्वास्थ्य बीमा मा मतभेद उमेर मा आधारित छन्, रोजगार, तपाईं हाल छ कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या, र तपाईं बनाउन कति पैसा.
हुँदा योग्य केहि मतलब लागि केही प्राप्त वा केही लागि योग्य गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो र आफ्नो परिवारको सरकार कार्यक्रम को लागि योग्य छन् भने सरकार निर्णय गर्नेछ. तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने निर्णय गर्न, तिनीहरूले तपाईंलाई बनाउन कति पैसा देखो, कति बच्चाहरु तपाईं, र कसरी पुरानो तपाईं. आप्रवासी र शरणार्थीका लागि स्वास्थ्य सस्तो वा निःशुल्क हुन सक्छ, तपाईं धेरै पैसा सुरुमा छैन बनाउन सकिन्छ देखि.
चिकित्सा अमेरिकी सरकारले चालु सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम छ. चिकित्सा सबै वयस्क उमेर उपलब्ध छ 65 र पुरानो र सबै उमेरका असक्षम नागरिक गर्न. चिकित्सा दबाइहरु को लागत सहायता गर्न एउटा योजना प्रदान गर्दछ. चिकित्सा बारेमा थप जान्न.
छोराछोरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (चिप) कम लागि स्वास्थ्य को लागि दिन्छिन्- साना बच्चाहरु मध्य-आय परिवारलाई. यसलाई आफ्नो बच्चाको डाक्टर भेटघाट र चिकित्सा हेरविचार लागि दिन्छिन् किनभने चिप राम्रो कार्यक्रम छ. शरणार्थी परिवार वार्षिक चेक-अप र प्रतिरक्षक लागि डाक्टर गर्न आफ्ना छोराछोरीलाई लिन लागि यो महत्त्वपूर्ण छ. आफ्नो राज्य गरेको चिप कार्यक्रम को लागि खोज.
तपाईं कम आय र एक बच्चा छ भने, यो एक राम्रो कार्यक्रम छ. आफ्नो राज्य गरेको खोजी WIC बारेमा थप जान्न र WIC कार्यक्रम.
को वहन हेरविचार ऐन (ACA), पनि भनिन्छ “ObamaCare,” सबैभन्दा अमेरिकी नागरिक र स्वास्थ्य बीमा गर्न कानुनी बासिन्दा आवश्यक. तर यो पनि सरकारबाट सहयोग संग तल्लो लागत लागि स्वास्थ्य बीमा किन्न अनुमति दिन्छ. यदि तपाईं हेर्न को वहन हेरविचार ऐन अन्तर्गत कवरेज प्राप्त.